HomeတူရကီMarmara ဒေသကြီး54 Sakaryaအဆိုပါကေဘယ်လ်ကြိုးကားကိုပြန် Sapanca နူးညံ့ MI လာဘ်ပေးလာဘ်ယူအတွက်ခဲ့သလဲ
04 / 10 / 2019 Levent Elmastaş 54 Sakarya, အထွေထွေ, ကောင်းကင်ကြိုး, Marmara ဒေသကြီး, တူရကီ, TELPHER 0
sapanca လာဘ်ကေဘယ်လ်ကားလေလံ froze ခဲ့ပါ
Bursa Cableway Inc က အထွေထွေမန်နေဂျာ Burhan Özgümüşကလည်း, သူတို့ကဆုချီးမြှင့်ရမှ£ 1 မြို့တော်ဝန်သန်းလာဘ်ထိုးထမြောက်တော်မူသည့်ကောလာဟလများကိုသူတို့စစ်မှန်တဲ့မဟုတ်ဟုဆိုသည်။
Özgümüş, စွပ်စွဲဘို့, သမ္မတရှေ့တော်၌ထိုနေ့ CHP Sakarya ခရိုင်ရန်သူ၏ခရီးစဉ်အတွင်းကဆိုပါတယ် "ဟု (ရဲ့ငါ့ကိုမကြောက်ကြကုန်အံ့, သင်မူကားအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်သည်ကြောက်လန့်နေ), ငါဆိုသည်ကား," ဟု၎င်းကပြောသည်။
စုစုပေါင်း7တထောင်ပေါင်
Özgümüş Burhan သူတို့လေလံပွဲအပြီးမှာနှစ်ခုသောအရပ်တို့ကိုမဖို့ပိုက်ဆံပေးသောရှင်းပြ, "ငါတစ်စုံတစ်ယောက်Hasanpaşaမူလတန်း2တထောင်ပေါင်ပန်းချီတယ်။ ၏တစ်ဦးကဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ "သူတို့ငါ့ကိုလက်ခံရရှိပေး၏အလှူငွေ၏တထောင်ပေါင် Sapancaspor ရဲ့ဘဏ္ဍာရေးအခြေအနေကို5အလွန်ဆိုးရွားဖြစ်ပါတယ်" ဟုသူတို့ကဆိုသည်။ အဘယ်သူမျှမတိကျတဲ့ပိုက်ဆံကထွက်ရှိတယ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုသူကပြောသည်။
နေ့စဉ် 820B အဆိုပါ LIRA
သူတို့စီမံကိန်းကနေဆငျးရဲခံရသည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတဲ့သူÖzgümüş "စည်ပင်သာယာ (ငါပေးပို့တည်နေရာကိုပြု၏။ သငျသညျအကြှနျုပျကိုအတူပြဿနာတစ်ခုရှိပါသလားဘယ်သူမျှမက, အဘယ်ကြောင့်အမိန့် start) သူကပြောပါတယ်။ ဒီတော့ငါလျော်ကြေးငွေ 820 တထောင်ပေါင်ပေးဆောင်တယ်နေ့တိုင်းပြုလုပ်ရပ်များများအတွက်နှောင့်နှေးရှိသေး၏။ "(Nurettin Eryilmaz / ကျွန်ုပ်တို့၏ Sakarya)
MI က Metro လေ့လာရေးခရီးတူရကီပြန်ပုံမှန်ရခဲ့သလဲ 02 / 04 / 2018 တူရကီက Metro ယခင်နေ့ကပင်လယ်ရုံးတင်စစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းနှစ်ဦးရထားမြို့တော်ဝန် Mustafa တူနာ၏တိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်သောမတော်တဆမှုနှင့် ပတ်သက်. ကြေညာချက်ကို လုပ်. , Twitter ပေါ်တွင်တစ်ဦးကကြေညာချက်တွင်ပြောကြားထားသည်ကြောင်းပျက်ကျမှုမြေအောက်ရထားအစောပိုင်းနံနက်နာရီအတွင်းကြုံတွေ့လျစ်လျူရှုသူဝန်ထမ်းများအတွက်ဖွင့်လှစ်ဖြစ်စနေနေ့ကဆိုသည်။ Kızılay-ပါတိတ်မြေအောက်ရထားလိုင်းကိုအတွက်အချိန်နံနက်အမျှထပ်ပုံမှန်သင်တန်းအတွက်ညု, သူ၏ Twitter account ကိုမျှဝေမတော်တဆမှုKızılay-ပါတိတ်မြေအောက်လိုင်းအတွက်စနေနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့သည်သိရသည် Continue လိမ့်မယ်ပြီးနောက်တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mustafa တူနာ, ပြုပြင်ခြင်းအလုပ်၏ပြီးစီးထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်။ အဆိုပါညုရှိမရှိဖော်ပြအချိန်ကိုရုံးတင်စစ်ဆေးလည်းအတွေ့အကြုံရှိတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်; မြေအောက်ရထားမတော်တဆမှုအပေါ်စနေနေ့နံနက် 5.30 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် ...
Sapanca Geyvan YHT လိုင်းစျေးပြိုင်ပါလီမန်၌ '' အကျင့်ပျက်ခြစားမှု '' စွပ်စွဲချက်အပေါ် 16 / 11 / 2017 လွှတ်တော်ရဲ့အစီအစဉ်ရန် "Sapanca Geyvan အမြင့်မြန်နှုန်းရထားလိုင်း" မော်တော်ယာဉ်ဝယ်ယူရေးအတွက်နောက်ဆုံးသြဂုတ်လကျင်းပ CHP Konya လက်ထောက်ဟိုစနီမူဘာရက် Booth ။ Booth သတင်းစာအဆိုအရဝန်ကြီးချုပ် Binali Yildirim များ၏တောင်းဆိုမှုများထင်ဟပ်အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သည့်စာချုပ်များမေးညှိနှိုင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအတွက်ဆိုပါတယ်နူးညံ့နှင့်တကွ, သတင်းတွင်ထင်ဟပ်နှင့်ယှဉ်ပြိုင်မှုကြောင့်ပါဝင်မှုများ၏နူးညံ့သောအခွအေနသယ်ဆောင်ပေမယ့်မသေချာသောတင်ဒါလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရာရောထွေးနူးညံ့သောပူးပေါင်းကြံစည်မှု, ပါဝင်မှုတောင်းခံအချို့ကုမ္ပဏီများဖိတ်ခေါ်ခဲ့မခံခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်အမှုကိုပြုညှိနှိုင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆို, အရှင်နူးညံ့သမ္မတနိုင်ငံတူရကီနိုင်ငံခြားရေးမီးရထား 1 998 အားဖြင့်တထောင်သန်းဘီလီယံခန့် 999 223 TL ဆောက်လုပ်ရေးမူရင်းကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်သူကပြောပါတယ်။ "Sapanca-Geyve High-Speed ​​ကို ...
မီးရထားဝန်ကြီးအိန္ဒိယတွင်ကြောင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမြွေပူရာကင်းရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီး 11 / 05 / 2013 မီးရထားဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး, အိန္ဒိယအိန္ဒိယမီးရထားဝန်ကြီး Kumar Bansal အတွက်ကြောင့်လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမြွေပူရာကင်းရာထူးမှနုတ်ထွက်ပြီးမိမိတို့၏ဆွေမျိုးသားချင်းများ၏လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုနှင့်အတူတရားစွဲဆိုခံရပြီးနောက်ရာထူးမှနုတ်ထွက်ခဲ့သည်။ Bansal, အရှုပ်တော်ပုံ, ပြည်နယ်ရုပ်မြင်သံကြားကသူ၏နုတ်ထွက်ပူဇော်ဖို့ကဆိုပါတယ်န်ကြီးချုပ်မန်မိုဟန်ဆင်း၏ထုတ်ဝေအပြီးတွင်သတင်းထောက်များကိုရန်ကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ အတိုက်အခံခေါင်းဆောင်များ, Bansal ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများ, ဝန်ကြီးသူတို့ဆက်ဆံရေးဟာသန့်စင်သုံးပြီးခဲ့ကြသည်ပြောဆိုထားသည်။ Bansal ၏တူဗီဂျေး Singla, ရထားလမ်းအုပ်ချုပ်ရေးမှဖက်ဒရယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးစွပ်စွဲစီးပွားရေးလုပ်ငန်းမျက်နှာသာဖို့လာဘ်ထိုးမာဟေး Kumar ကအပါအဝင်ဝန်ကြီးဌာနကဝန်ထမ်း 1665တထောင်အဖြစ်ဒေါ်လာ, သောအဖမ်းခံရလူတစ်ဦးကြေညာခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ပြည်နယ်ရုပ်မြင်သံကြား, ကွန်ဂရက်ပါတီ, ပြန်ရေးဖို့အတွက်ကျောက်မီးသွေးရောင်းအားသဘောတူညီချက်များ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပေါ်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏မူကြမ်းအစီရင်ခံစာ ...
ပိုက်ဆံချေးဖို့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမဟုတ်ပါဘူး 13 / 01 / 2014 လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုပိုက်ဆံချေးမငှါး: ပိုက်ဆံ၏နူးညံ့သောအကြံအဖန်အဖမ်းခံရလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများနှင့်စာပိုဒ်တိုများသံသယရှိသူ၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်း '' İmbatအတွက် Izmir တစ်ဦးချင်းစီကတခြားအကြားလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုအသွားအလာမဟုတ်ပါဘူး, သူတို့ချေးပိုက်ဆံကြောင်းအကြံပြုခဲ့သည်။ လူတွေစီးပွားရေးဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်ရေးအကျင့်ပျက်ခြစားမှုသည်စစ်ဆင်ရေးအတွင်းအဖမ်းခံရ 14 TCDD ဆိပ်ကမ်း၏အမည်နှင့်အတူ Izmir "İmbat Wave ကို" အတွက်ထုတ်ပြန်ချက်များအချို့သည်တရားရုံးတွင်ထင်ရှား။ , စီးပွားရေးသမား, စစ်ဆင်ရေးနိုင်ငံရေးအရ MCB ဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်စက်ရုံကြောင့်ကြေညာချက်ထဲမှာစွပ်စွဲချက်များသိမ်းယူခံရဖို့ဆိုသည်ကား, သူကပြောတယ် "ငါ TCDD နူးညံ့ထံမှ4အမျိုးမျိုးသောရက်စွဲများတယ်။ အခါတိုင်းကျွန်မဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ပြစ်ဒဏ်ဖြတ်တောက်အကြောင်းမဲ့ခံခဲ့ရသည်။ ဟောင်းများပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီး Binali Yildirim, ငါ့အိမ်ထောင်ကိုငါ၏အသက်သေဖြစ်တော်မူ၏။ သူ့ကို Izmir တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ် 17 ရည်ညွှန်းကြောင့် ...
အဆိုပါလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိစ္စတွင်İZBAN (ဗီဒီယို) ခုနှစ်တွင် 04 / 02 / 2013 နာမဝိသေသနကိုစီရင်သကဲ့သို့လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိစ္စတွင်İZBANတဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Aziz က Kocaoglu ကို 'ဂန်ခေါင်းဆောင်' 'မှာတော့ 130 တရားခံတဲ့ Metropolitan သိသိသာသာအသေးစိတ်ကိုအမှုအဘို့ပြင်ဆင်သောကျွမ်းကျင်သူအစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ İZBAN Image ကိုရုပ်ရှင်နှင့်ရုပ်ရှင်ကိုယ်စားပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဝယ်ယူရေးဖိုင်တွေဆနျးစစျဖို့ခြိနျးကျွမ်းကျင်သူအတွက် 32 ရုပ်ရှင်ရုံ, ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်မှုကုမ္ပဏီဆွဲဆောင်စွပ်စွဲခံရသူမန်နေဂျာထံမှ 125 တထောင်ပေါင်မေတ္တာရပ်ခံပြီးအပြုသဘောတုန့်ပြန်မရနိုင်တော့လည်းစွပ်စွဲအစီရင်ခံစာ con ကိုပြင်ဆင်ခဲ့ပါတယ်။ စွပ်စွဲခံရသူ Muzaffer သဘောတူညီမှု၏ Sportsnet ကုမ္ပဏီရှေ့နေများကတစ်ရွေသဘောထားကိုနှင့်အတူ e-mail, မှတဆင့်သူတို့ကိုရောက်ရှိပြီးတော့မတိုင်မီသရုပ်ပြယုံကြည်မှုအနိုင်ရ ...
MI က Metro လေ့လာရေးခရီးတူရကီပြန်ပုံမှန်ရခဲ့သလဲ
အဆိုပါလာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကိစ္စတွင်İZBAN (ဗီဒီယို) ခုနှစ်တွင်
Alanya မြူနီစီပယ်တင်ဒါကေဘယ်လ်ကြိုးကားထဲတွင်မသေချာမရေရာရှိပါတယ် ...
cable ကိုကားတစ်စီးစက်ရုံ၏ Izmir Urla သက်တမ်းတိုးသည့် STM ကုမ္ပဏီအတွက်ကန်ထရိုက်များအတွက်တင်ဒါရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်နေသည်
ဒုတိယခြေလှမ်း cable ကိုကားတစ်စီးတင်ဒါအပေါ်ပြီးစီးခဲ့သည်
Alanya Castle Ropeway Project မှစျေးပြိုင်အတွက်မသေချာမရေရာမှုများရှိပါတယ် ...